စုံတွဲတွေဘာလို့ခဏခဏရန်ဖြစ်ကြတာလဲ….🙃🙃 – Trend.com.mm
Posted on September 9, 2018 September 6, 2018 by Shun Lei Phyo
နေရာတိုင်းအတွဲတိုင်းကြည့်လိုက်ရင် တော်တော်များများရန်မဖြစ်ပဲအမြဲအေးအေးလူလူဖြစ်နေတဲ့အတွဲဆိုတာရှားမှရှားပါပဲ။ ထူးတော့ထူးဆန်းသားချစ်လို့ တွဲကြပင်မဲ့ ဘာလို့ရန်ခဏခဏဖြစ်ကြတာလဲပေါ့…ရန်ဖြစ်လို့မချစ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး ချစ်ချက်ပဲ…ဒါပင်မဲ့ရန်ဖြစ်ကလည်းမပျက်ဘူး။ဆိုတော့ သမီးရည်းစားတွေချစ်လျက်နဲ့ဘာအကြောင်းတွေကြောင့်ခဏခဏရန်ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတာ….
သေချာပါတယ် အတွဲတိုင်းသ၀န်တိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ရန်မဖြစ်ဘူးတာမရှိပါဘား။ တကယ်ချစ်မိတဲ့သူတွေဆိုပိုဆိုးတယ်။ ကိုယ့်ရည်စားဘာလုပ်လုပ်ဘယ်သွားသွားသူမပါရင်ကိုစိတ်မချပဲဖြစ်နေတာမျိုး၊ တစ်စိမ်းမိန်းကလေး တစ်စိမ်းယောက်ျားလေးကအစ သူငယ်ချင်းအဆုံး တစ်ယောက်မချန်နဲ့စိတ်မချပဲ သ၀န်တိုတတ်လွန်းကြပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့သတ်ရပေါင်းလည်းနည်းမယ်မထင်ပါဘူး။
ကိုယ့်ရည်စားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဖင်ချင်းဆက် ရင်ချင်းဆက်တွေမှမဟုတ်တာရယ် ကိုယ့်စိတ်ကဘာကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုအကုန်ဘယ်သိနိုင်ပါ့မလဲ…ဒါပင်မဲ့ဒါကိုသိသိကြီးနဲ့တောင်ကိုယ့်အကြိုက်ကိုနားမလည်လို့ ကိုယ်ပြောချင်တာကိုသဘောမပေါက်လို့ အလိုက်မသိလို့ဆိုတာတွေနဲ့တစ်ခါတစ်ရံစကားများတတ်ကြပါသေးတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်မြတ်နိုးလာတဲ့အချိန်ကာလကြာတဲ့အခါသံယောဇဉ်တိုးပြီးပိုပိုချစ်လာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာပိုချစ်မိနေတဲ့သူက ကိုယ်ချစ်သလောက်သူ့ကငါ့ကိုအချစ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေလွဲတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့သူက ပုံမှန်ပါပဲ…ကိုယ်ကအချစ်ပိုမိတော့ကိုယ့်အချစ်ကိုမမှီရကောင်းမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်းပြဿနာရှာကာ ရန်ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့်အခုခေတ်အတွဲတွေက ပွင့်လင်းမြင်သာလာတဲ့အခြေနေအရစတွဲကတည်းကတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်ခရေစိတွင်းကျပြောပြရင်းတွဲကြတာများပါတယ်။ ဒီလိုအခြေနေမျိုးမှာ ဘယ်သွားသွားဘာလုပ်လုပ် အကျိုးကြောင်းပြောပြရတဲ့စနစ်လည်းရှိပါတယ်။ ပုံမှန်ပြောပြနေကြတိုင်းမပြောမိတာမျိုးတွေလစ်ဟာသွားတဲ့အခါလည်းထသတ်ပြန်ရသေးပါတယ်။
ဒါတွေကတော့သမီးရည်းစားအများစုကြားဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးတွေပါပဲ…မဆန်းတော့လည်းမဆန်းပါဘူး လေဒါတွေအားလုံးကချစ်လို့ဖြစ်လာတာတွေကြီးပါပဲ…ရန်မဖြစ်ရင်သာတစ်မျိုးကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာ..ဒါပင်မဲ့ရန်ကနေ အမုန်းမဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့..စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်လို့ရပင်မဲ့ စိတ်နာတဲ့အဆင့်ထိတော့မရောက်ဖို့လိုပါတယ်။ယူတို့အတွဲမှာလည်းဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာ ရဲရဲကြီးဝန်ခံလိုက်ပါ….
နရောတိုငျးအတှဲတိုငျးကွညျ့လိုကျရငျ တျောတျောမြားမြားရနျမဖွဈပဲအမွဲအေးအေးလူလူဖွဈနတေဲ့အတှဲဆိုတာရှားမှရှားပါပဲ။ ထူးတော့ထူးဆနျးသားခဈြလို့ တှဲကွပငျမဲ့ ဘာလို့ရနျခဏခဏဖွဈကွတာလဲပေါ့…ရနျဖွဈလို့မခဈြဘူးလားဆိုတော့လညျးမဟုတျဘူး ခဈြခကျြပဲ…ဒါပငျမဲ့ရနျဖွဈကလညျးမပကျြဘူး။ဆိုတော့ သမီးရညျးစားတှခေဈြလကျြနဲ့ဘာအကွောငျးတှကွေောငျ့ခဏခဏရနျဖွဈကွတာလဲဆိုတာ….
သခြောပါတယျ အတှဲတိုငျးသဝနျတိုတဲ့ကိစ်စနဲ့ရနျမဖွဈဘူးတာမရှိပါဘား။ တကယျခဈြမိတဲ့သူတှဆေိုပိုဆိုးတယျ။ ကိုယျ့ရညျစားဘာလုပျလုပျဘယျသှားသှားသူမပါရငျကိုစိတျမခပြဲဖွဈနတောမြိုး၊ တဈစိမျးမိနျးကလေး တဈစိမျးယောကျြားလေးကအစ သူငယျခငျြးအဆုံး တဈယောကျမခနျြနဲ့စိတျမခပြဲ သဝနျတိုတတျလှနျးကွပါတယျ။ ဒီကိစ်စနဲ့သတျရပေါငျးလညျးနညျးမယျမထငျပါဘူး။
ကိုယျ့ရညျစားနဲ့ကိုယျနဲ့ကဖငျခငျြးဆကျ ရငျခငျြးဆကျတှမှေမဟုတျတာရယျ ကိုယျ့စိတျကဘာကိုလိုခငျြတယျဆိုတာကိုအကုနျဘယျသိနိုငျပါ့မလဲ…ဒါပငျမဲ့ဒါကိုသိသိကွီးနဲ့တောငျကိုယျ့အကွိုကျကိုနားမလညျလို့ ကိုယျပွောခငျြတာကိုသဘောမပေါကျလို့ အလိုကျမသိလို့ဆိုတာတှနေဲ့တဈခါတဈရံစကားမြားတတျကွပါသေးတယျ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျခဈြမွတျနိုးလာတဲ့အခြိနျကာလကွာတဲ့အခါသံယောဇဉျတိုးပွီးပိုပိုခဈြလာတတျကွပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာပိုခဈြမိနတေဲ့သူက ကိုယျခဈြသလောကျသူ့ကငါ့ကိုအခဈြဘူးဆိုတဲ့အမွငျတှလှေဲတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့သူက ပုံမှနျပါပဲ…ကိုယျကအခဈြပိုမိတော့ကိုယျ့အခဈြကိုမမှီရကောငျးမလားဆိုတဲ့စိတျနဲ့ဒေါသဖွဈရငျးပွဿနာရှာကာ ရနျဖွဈတတျကွပါတယျ။
အထူးသဖွငျ့အခုခတျေအတှဲတှကေ ပှငျ့လငျးမွငျသာလာတဲ့အခွနေအေရစတှဲကတညျးကတဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျခရစေိတှငျးကပြွောပွရငျးတှဲကွတာမြားပါတယျ။ ဒီလိုအခွနေမြေိုးမှာ ဘယျသှားသှားဘာလုပျလုပျ အကြိုးကွောငျးပွောပွရတဲ့စနဈလညျးရှိပါတယျ။ ပုံမှနျပွောပွနကွေတိုငျးမပွောမိတာမြိုးတှလေဈဟာသှားတဲ့အခါလညျးထသတျပွနျရသေးပါတယျ။
ဒါတှကေတော့သမီးရညျးစားအမြားစုကွားဖွဈတတျတဲ့ လက်ခဏာမြိုးတှပေါပဲ…မဆနျးတော့လညျးမဆနျးပါဘူး လဒေါတှအေားလုံးကခဈြလို့ဖွဈလာတာတှကွေီးပါပဲ…ရနျမဖွဈရငျသာတဈမြိုးကွီးဖွဈရငျဖွဈနမှော..ဒါပငျမဲ့ရနျကနေ အမုနျးမဖွဈဖို့တော့လိုတာပေါ့..စိတျဆိုးစိတျကောကျလို့ရပငျမဲ့ စိတျနာတဲ့အဆငျ့ထိတော့မရောကျဖို့လိုပါတယျ။ယူတို့အတှဲမှာလညျးဒီလိုကိစ်စတှကွေောငျ့ရနျဖွဈကွတယျဆိုတာ ရဲရဲကွီးဝနျခံလိုကျပါ….